Akụkọ kachasị n'ụtutu a: CAN akagbuola ngagharị iwe ha hibere - BBC News Ìgbò
Akụkọ kachasị n'ụtutu a: CAN akagbuola ngagharị iwe ha hibere
7 Julaị 2018
Akụkọ ndị dị mkpa n'ututu a
Dino Melaye 'etiela egwu'
Skip Instagram post by dinomelaye
A post shared by Senator Dino Melaye (SDM) (@dinomelaye) on Jul 6, 2018 at 1:22pm PDT
End of Instagram post by dinomelaye
Sinetọ Dino Melaye emeela ihe e ji kpụrụ ya n'ọnụ ọzọ.
Dino Melaye etiela egwu ọzọ ebe ọ jara otu pati PDP mma na-asị na ọ chọrọ ịlaghachị, ma kwuo na APC ataala ya ahụhụ.
Gụọ akụkọ a n'uju ebe a Dino Melaye: Onye omeiwu ukwu etiela egwu ọzọ
CAN na NSCIA etinyela ọnụ n'okwu ogbugbu ndị mmadụ
Ngalaba a kpọrọ Nigerian Supreme Council of islamic affairs agwala gọọmentị etiti ka ha gbaa mbọ hụ na nchekwa ruru ime obodo, maka ogbugbu mmadụ na-eme na Naịjirịa, ma na-akatọ okwu dị iche iche ndị ụkọchukwu na-ekwu maka ya.
Nke a na-eme ka ndị otu Christian Association of Nigeria kagburu ngagharị iwe ha chọburu ime n'ụbọchi iri na otu nke ọnwa a gbasara oke ogbugbu na Naịjirịa. Ha sị na ọ ga-adịba ruo mgbe a mara ọkwa ọzọ.
Onyeisi ha bụ Samson Olasupo Ayokunle, kwuputere nke a ụnyaahụ n'akwụkwọ ndepụta, ebe o kwukwara na ha ga-eme ekpere na ibuọnụ ụbọchị atọ n'ụlọụka niile dị na Naịjirịa nakwa ngalaba CAN niile dị na steeti niile, nke ga-ebido n'ụbọchị Julaị 9 ruo Julaị 11.
Otu ndị ụka niile bụ CAN ebidola ngagharị iwe
Ị ma na onyeisi ụka Alakụba zọpụtara ndị ụka Kraist 262 na Plateau?
N'akụkọ mba ofesi
Ngalaba na-elebanye anya na kemịkal e ji eme ngwaagha a kpọrọ "Organization for the Prohibition of Chemical Weapons" na Bekee, e kwuola na ọ bụ klorine ka ndị omekome jiri wakpoo ma gbuo ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo Douma dị na Syria n'ọnwa Epreelụ.
Ịji cheta ka ihe a si mee n'ọnwa Epreelụ, gụọ ya ebe a Ọgụ Sirịa: Ngwaagha kemịkal egbuola ọtụtụ ndị mmadụ
Mba Amerịka, UK na Fransị awakpoola Sirịa
Ndị agha Syria ekela Ghouta ụzọ atọ
N'egwuregwu, ka a gbapụrụ Brazil n'asọmpi Iko Mbaụwa ụnyaahụ, onye nchịkọta ha bụ Tite, ekwuola na ha pụrụ maka na Belgium bụ ndị ha zutere, gbakarịrị ha.
N'otu aka ahụ, cheta na Ingland na Swiden ga-ezute ibe, ebe Rọshịa na Kroeshia ga-asọ mpi ịmata ndị ga-agafe agba ọkara Ikpeazụ.
Nwamba buru amụma na Argentina ga-emeri Naịjirịa anwụọla
Gịnị ka ọchụchụ Amaju Pinnick dịka onyeisi NFF pụtara?
Gee nkeji nke ụtụtụ a ebe a
Ihe nkiri nke taa
Media captionIllbliss maka Biafra.